आपत्तमा सहयोगी भूमिका निभाउँदै ‘बास’ - Arthapage
प्रकाशित मितिः २ जेष्ठ २०७८, आईतवार १७:३० May 16, 2021
नेपालगन्ज : बागेश्वरी असल शासन क्लव कोभिड महामारीका बेला सक्रियतापूर्वक सेवामा लागेको छ । महामारी व्यवस्थापनको काममा निरन्तर सक्रियतापूर्वक लागेको संस्थामा बास अग्रपंक्तिमा छ । सहयोगकै क्रममा भेरी अस्पताल विकास समितिलाई कोभिड नियन्त्रणका लागि ९० हजार नगद सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ ।
कोभिड १९ का बिरामीहरुका लागि अक्सिजन खरिद गर्ने उद्धेश्यले नेप्लीज अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्श डलास र टेक्सास मेडिकल एशोसियसनको सहयोगमा बास नेपाल नेपालगन्जले सो रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।
भेरी अस्पतालमा भएको सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा भेरी अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमोद कुमार धिताल, भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश बहादुर थापालाई बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह, निर्वतमान अध्यक्ष मन भण्डारी र निर्देशक हेमराज भट्टले ९० हजारको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
चेक ग्रहण पश्चात बोल्दै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धितालले महामारिका बेला भएको सहयोगले अस्पताललाई काम गर्ने उर्जा थपेको बताए । भेरी अस्पतालमा आउने कुनै पनि विरामी वेडकको अभावमा फर्किनु नपर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । उनले भोलिका दिनमा आउने जोखिमका लागि समेत अस्पताल तयारीमा रहेको भन्दै कोभिडको पहिलो चरण र अहिले दोश्रो चरणमा बासले गरेको सहयोगले निकै सहयोग पुगेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश बहादुर थापाले अहिले कोभिडको जटिल अवस्थामा बासले गरेको सहयोग र सहकार्यका लागि धन्यबाद ज्ञापन गरे ।
सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले अस्पताललाई आईपर्ने सहयोगमा बासले सक्दो सहयोग गर्ने बताएको सूचना अधिकारी हेमराज भट्टले बताए ।
प्रकाशित मितिः २ जेष्ठ २०७८, आईतवार १७:३० |
Prevस्टेशनरी व्यवसायीद्धारा कोभिड प्रभावितको भोजन व्यवस्थापनमा खाद्यन सहयोग
Nextकोभिड नियन्त्रणमा नेपालगञ्ज उपमहानगरले गरेका मुख्य कामहरु